कम्युनिष्ट पार्टी मिल्नु को बिकल्प छैन ! | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७८ असार २६ गते ०८:०२
२००६ साल भाद्र २९ गते नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको हो । त्यतिखेरको पार्टीनिर्माणमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, नरबहादुर कर्माचार्य, लगायत हुनुहुन्थ्यो । बिश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको लहरसगै नेपालमा पनि निरकुश शासन काल सगै मुक्क्तिको आन्दोलन छदै थियो । त्यस स्थापनाको अर्को बर्षनै प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । २००७सालमै त्यस पछिको पाटिको स्थापना र संगठन बिस्तार हुँदै गयो । सर्बहारा बर्ग र निमुखा बर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले विभिन्नसमस्या र सामना र खवरदारी गरिरहे स्थापनाको सुरुमै पञ्चायती साशनको सामना गर्नु पर्यो१त्यसपछी को जनमत संग्रह पछि २०४६र४७को जनआन्दोलन को नेतृत्व गर्यो यो कम्युनिस्ट पार्टी बिना संभावना थिएन ।
उक्त आन्दोलन पश्चात् देशमा राम्रो संविधान पनि जारी भयो त्यसपछिको चुनावमा बामपार्टीप्रमुख पर्तिपक्षी भएर जनमाझ आयो । कम्युनिस्टपार्टिपर्तिको आशा र आकर्षणजनस्थरमा बढ्दै गयो । किनकी देशमा धेरै आमुलपरिबर्तन नै कम्युनिस्ट पार्टिबाटै भएका छ्न । सबै जाती भासाभासी सास्कृतीको रक्षक जनस्थको जनमुखी शासन ब्यबस्था, छुवाछूतको अन्त्य, सामाजिक बिकृतिको अन्त्य, अन्याय र अत्याचार विरुद्धखवरदारी भन्डाफोर दुखीगरिबको शासन , समानुपातिक समाबेशी प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक शासन ब्यबस्था । बिकास निर्माण, रोजगारीको ब्यबस्था,उधोग धन्दाको बिकास, सिमानाको रक्षा जस्ता जनसेवी कामहरु यहीँपार्टी बाटै सम्भब भएका छ्न ।
२०५१ को चुनाबमा पहिलो पटक नेपाली राजनितीमा कम्युनिस्ट पार्टी ठूलो पार्टी भएर जनमाझ आयो त्यसैको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले गर्नु भएको थियो । त्यो सरकारको शासन ब्यबस्था निकै राम्रो रहेको थियो । छोटो नौं महिने शासन कालमा राम्रो काम र एजेन्डाहरु जनमुखी हुँदा आमनेपाली जनताले धेरै मनपराएका थिए । चर्चित कार्यक्रमहरु आफ्नो ुगाउँ आफै बनाऔुं, ुबृद्ध भत्ताु, ुभष्टाचार नियन्त्रणु प्रभाबकारी योजनाहरु कार्यावन्यन भए । ६२र६३को आन्दोलनमा पनि कम्युनिस्टपार्टिहरुको उत्तिकै ससक्त भुमिका थियो । उनीहरुकै त्यो संयुक्त आन्दोलनले सफलता हासिल गर्‍यो । ०६४ को संविधान सभाचुनाब पनि नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टीकोरुपमा आयो जति मत पाएको थियो ।
त्यो अनुसार सफल काम नगर्दा निकै आलोचित हुनुपरेको थियो । जुन राजनीतीक नारामा एजेन्डा थिए त्यो अनुसार काम भएन । त्यतीखेर पनि बामपंथी हरुको स्पष्ट बहुमत छदै थियो । तर किन आपसमा मिलेर प्रभाबकारी र जनमुखी सरकार चलाउन सकेनन ? त्यो थियो कार्यकुसलताको कमि अरुको अस्तित्व स्विकार्न नसक्नु । यदि उनीहरुले चाहेको भए त त्यतिखेरै संविधान बनाउन सक्थे नि त्यहिंबाटै भएको थियो गल्ती, जनमतको सदुपयोग हुन सकेन बिकासका कार्यक्रम हुन सकेनन, संविधान बन्न सकेन, जसको कारण ०७० को चुनावमा पहिलो पाटी तेस्रो स्थानमा पुग्यो । त्यतिखेर पनि दुई बामपन्थीकै बहुमत हुन्थ्यो तर नेपाली काङ्ग्रेसले ठूलो पार्टिको हैसियतमा संयुक्त सरकारको रुपमा सत्ता समाल्यो जसले गर्दा उ संविधान बनाउन सफल पनि भयो ।
त्यसपछि सहमती अनुसार केपी शर्मा ओली सरकारको बगडोर समाल्न आउनु भयो । त्यसैबेलामा नाकाबन्दीको सुरुमै सामना गर्नु परेको थियो । जसको उहाँले ड्टेर सामना गर्नु भएको थियो । त्यसकै प्रभाब थियो ०७४ को चुनाव फेरि बामपंथी प्रति जनिवश्वास प्राप्त भयो । त्यतिबेला सुखी नेपाली सम्बृद्ध नेपाल, ‘उद्योगको बिकाश, संघीय शासन प्रणाली, जनमुखी शासन, बिदेशी लागानी भित्र्याउने, लगानी भित्र्याइ बिकासमा नयाँ गति दिइ बेरोजगारीको अन्त्य यावत कार्यक्रमहरु उनिहरुकै सबै ठाउँमाआफ्नै सरकार हुँदा पनि किन सफल हुन सकेको छैन ? किन सुरक्षित आफ्नो बहुमत हुँदा पनि यी पार्टीहरु एकआपसमा मिल्न सक्दैनन् ? आफ्नै स्पष्ट बहुमत छ्दा पनि किन बिपक्षीसँग काँध जोडन जान्छ्न ? यी बामपंथी पार्टीका नेतागणहरु आफू सुरक्षीत छ्दा छ्दै अरुसग मिल्नजानु कत्तिको जायज हो ? के जनमतको सम्मान यहि हो ? के समयको माग यहिं हो ?
त्यसैले अब बामपंथी पार्टीहरुले पुन सच्चिनु पर्छ र जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ । चुनावमा गरेका बाँचाहरु जतिसक्दो पूरा गर्नु पर्छ । बिदेशी लागानी भित्र्याउनु पर्छ । देशमा उद्योग धन्दाको बिकास गर्नुपर्छ । रोजगारी बढाउनु पर्छ । भारतसँगको सिमा बिबाद मिलाउनु पर्छ । बेरोजगारी देशबाट अन्त्य गर्नुपर्छ । असन्तुलित बैदेशिक ब्यापारलाइ स्वादेशी उत्पादित वस्तुहरु निर्यात गरि र नचाइदो बिदेशी बस्तु रोक्नु पर्छ । यो समय कोरोनाले आक्रन्त देशमा सबै क्षेत्रहरु तहसनहस नै छ उक्त काममा पुन सबै क्षेत्रहरु पहिलेकै स्थान ल्याउन आजै देखि काम सुरु गर्नुपर्छ ।
बिरामीको उपचारको लागि हस्पिटलको ब्याबस्था गर्नुपर्छ । राहतका कार्यक्रमहरु तत्काल ल्याउनुपर्छ । सम्पूर्ण देशका नागरिकलाई कोरोनाको खोप लगाउने ब्यबस्था गर्नुपर्छ । सँधैभर निषेधाज्ञाले काम गर्दैन । यसैको लागि पनी पुन बामपंथी सक्तिहरु एकठाउमा हुनु बर्तमान आबस्यक छ । देशमा जतिपनी कम्युनिस्ट पार्टिहरु छ्न उनिहरु तत्काल एउटै नारामा हुनुपर्छ । आपसमा मिलेर कम्युनिस्ट शासन देशमा दिनुपर्छ । बर्तमान नेतृत्व असफल भए त्यसको समीक्षा गरि बर्तमान नेतृत्वलाई सल्लाहकारमा राखी यसको नेतृत्व पार्टीको दोस्रो पुस्ताले गर्नुपर्छ । देशले सुवाउने खालको कम्युनिस्टशासन लागुगर्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीका बर्तमान नेताहरु निमुखाको पार्टीभन्ने उनिहरु किन बढी सौखिन देखिन्छ्न ?
राजनिती भनेको समाज सेवा हो । कसरी उनीहरु सौखिन हुन सके ? गगनचुम्बी महलहरु कसरी आए यसको तत्काल समीक्षा र छानबिन हुनुपर्छ । कम्युनिस्टको सिद्धान्तबिपरित काम गर्नेलाई तत्काल पार्टीबाट हटाउनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टी देश र जनताको सर्बहारा बर्गको पार्टी बन्नु पर्छ । देशको शासन ब्यबस्था गतिशील दिनुपर्छ । जसको लागि सम्पूर्णदेशका कम्युनिस्ट पार्टिहरु एकठाँउमा उभिनु जरुरी छ ।